Soomaaliya oo gaartay guul siyaasadeed + is afgaradka Kenya iyo dacwadii oo go’aankeeda Maxkamada loo dhaafay | Xaysimo
Home War Soomaaliya oo gaartay guul siyaasadeed + is afgaradka Kenya iyo dacwadii oo...
Soomaaliya oo gaartay guul siyaasadeed + is afgaradka Kenya iyo dacwadii oo go’aankeeda Maxkamada loo dhaafay
Wadahadallo saddex geesood ah oo ay magaalada New York ku yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Madaxweynaha Masar Mudane Cabdulfataax Al Sisi ayaa kusoo idlaaday is faham sida ay sheegtay madaxtooyada Villa Somalia.
Sida lagu xusay qoraalka Villa Somalia Madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac kuwaas oo ka shaqeynaya ka mira dhalinta isafgaradka haatan la gaaray.
Waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku adkeysatay in kiiska badda go’aan kiiska loo daayo Maxkamadda Caddaaladda Adduunka, taas oo la isku waafaqay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u mahadcelinayso Madaxweynaha Masar Mudane Cabdulfataax Al-Sisi oo dawrka hoggaamineed ka qaatay wada hadallada Kenya iyo Soomaaliya.
Talaabadan ayaa a guul weyn oo ay gaartay Dawladda Federaalka Soomaaliya, maadaama taladeedii aayd in Dacwadda badda go’aankeeda loo daayo Maxkamada, islamarkaana ay labada shacab xiriir fiican yeeshaan, arintani waxay meesha ka saaraysaa Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo Kenya ku gacan siinayey siday badda Soomaaliyeed u qaadan lahayd.